Mogadishu Journal » 2018 » July » 2
Mjournal : -Wararka inaga soo gaaraya degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in caawa fiidkii halkaasi uu ka dhacay qarax si weyn looga maqlay qeybo ka tirsan Muqdisho. Aagga uu qaraxa ka dhacay oo aheyd...
Xulka Brazil ayaa u soo gudbay wareegga 8-da ee tartanka ciyaaraha adduunka 2018 kadib markii ay 2-0 ay ugaga badiyeen xulka Mexico. Ciyaaryahanka xulka Brazil ee Neymar Jr ayaa u soo saaray xulkiisa wareegga siddeeda iyadoo ciyaaryahanada caanka ah ee Messi iyo Ronaldo ay awoodi...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir-gudoomiyay kulanka Tubta siyaasadda loo dhanyahay oo looga hadlayay dabagalka iyo dhaqan gelinta qodobbadii kasoo baxay shirkii amniga Qaranka ee Baydhabo iyo diyaar garowga shirka...
Mjournal :-Dowladda Ingiriiksa ayaa qalab ay qiimahooda gaaraysa 5.6 milyan oo baund ugu deeqday Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) si ay gacan uga geystaan nadiifinta waddooyinka muhiimka ah xilli ay ciidamadu sii xoojinayaan hannaanka kala-guurka ah ee ku saleysan...
Dhaawacyo ka dhashay gaari ku qarxay agagaarka Isgoyska Siinaay ee Muqdisho
Mjournal :-Gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa ayaa maanta duhurkii ku qarxay agagaarka Isgoyska Siinaay ee degmada Warta Nabadda, kaasoo ka dhashay dhaawacyada illaa 3 ruux. Sida wararku sheegayaan gaariga ayaa ahaa gaari yar, waxaana lagu xiray waxyaabaha qarxa ee Magnada leh ee...
Mjournal :-Ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya ayaa saakay darawal Mooto Bajaaj waxa ay ku dileen halka loo yaqaan Seybiyaano oo ku dhaw Isgooska Banaadir, waxaana dilkaasi aad uga carooday darawalada Bajaajta ku xamaasha. Sida aan Wararka ku heleyno Ninka la dilay oo watay Mooto...
Mjournal :-Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cambaareysay weerar madaafiic ahaa oo shalay lagu qaaday xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta oo ku qornaa afka English-ka ayaa loogu tacsiyadeeyay dadkii...
Mjournal : -Tababaraha Brazil Tite ayaa xaqiijiyay in kulanka 16ka xulkiisa kula ciyaarayaan Mexico Samara uu isbedel ku sameyn doono shaxdiisii ugu dambeysay ee wajahday Serbia. kulankii ugu dambeeyey ee Group-yada, Filipe Luis ayaa bedelay daafaca bidix ee Marcelo kaasoo...
Mjournal :-Weli waxaa saan saan colaadeed laga dareemayaa deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool, kaasi oo bishii ina dhaaftay ay dagaalo culus ku dhexmareen Somaliland iyo Puntland, ilaa haddana ma jirto xabad joojin rasmi ah oo la dhex dhigay dhinacydan. Ku xigeenka...
Ciyaartan oo qaybteedi hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah ayaa markii la isku soo laabtay labada xulba aysan usuurta galin midkoodna uu shabaqa gaaro. Taas qasab kadhigtay in ciyaarta lagu daro 30-daqiiqo o dheeri ah si midkood uu ugu biiro kooxaha iska xaadiriyay wareegga...